Ungayifumana njani kwakhona iPassword ye-Instagram, Fumanisa ngoku! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyifumana kanjani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram, Fumana ngoku!
NgoJanuwari 15, 2019 0 IiCententarios 1293
Inani labasebenzisi kwiinkonzo zonxibelelwano ezahlukeneyo ziyanda. Kwaye kukho amalungu amaninzi amatsha awasebenzisayo. Instagram Liqonga elinomtsalane, apho umsebenzisi unokuthumela iifoto kunye nevidiyo. Ngale inethiwekhi, abasebenzisi abaninzi kufuneka bapapashe awona maxesha angalibalekiyo. Kungenxa yokuba ngaphambi kokulahleka kwepaswedi yomsebenzisi, usetyenziso lwenze indlela efanelekileyo. Impendulo yendlela yokufumana kwakhona iphasiwedi ye-Instagram ilapha. Kuya kuvela, ukunqanda umsebenzisi ukuba alahlekelwe zizinto zonke kwaye iinkumbulo ezixabisekileyo, inethiwekhi kufuneka ibe nokukhethwa "Ndiyilibele iphasiwedi yam".
Ukuba ukubalwa kweenkcukacha-manani kwenziwa ngokuba bangakanani abasebenzisi abazilibeleyo inombolo yokuvula yenye yenethiwekhi yokuncokola, ingangumlinganiso ongenakuthelekiswa nanto. Ukusukela ukwenzeka koku kuqhelekile. Ngakumbi ngakumbi xa idatha ingagcinwanga ngqo kwisicelo. Ukongeza, ukuba umsebenzisi ngamnye olibele i-password yabo thintela ukufikelela Kwinethiwekhi ngokuqinisekileyo, iya kuba yimpazamo. Kuba isicelo siza kuphulukana nabasebenzisi abaninzi kunye nabalandeli.
Ukulibala kwe password Inokwenzeka ngezizathu ezingenasiphelo kunye nezinto ezinokwenzeka. Nokuba kungaphulukana nefowuni, okanye uyifomati. Isenokubangelwa kukusetyenziswa kancinci okanye ukuvulwa komsebenzisi kwiselula okanye kwenye. Ke ngoko, ngaphambi koku Iintlobo ngeentlobo zemoto lIqonga kufuneka ukuba laqonda ukuba kunokwenzeka ukuba umntu lowo afumane iphrofayili yakhe kwakhona. Kungenxa yoko le nto ukhetho ndiyilibele iphasiwedi yam ibikhona iluncedo kakhulu okoko yasungulwa.
Iqonga le Instagram izisa nesixhobo Qinisekisa isazisi yomsebenzisi. Ngale ndlela unokuvumela ukufikelela komsebenzisi kwiprofayili ehambelanayo. Ke, oku kuya kunciphisa inani labasebenzisi abasala ngaphandle kokusetyenziswa yi andikhumbuli iphasiwedi yakho Unokuba nomdla wokwazi Ufumana njani abalandeli abaninzi.
Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram
Iindlela zokufumana iphasiwedi ye-Instagram yahlukahlukene. Iqonga kwafuneka liqinisekise ngokuchanekileyo Isazisi Kungenxa yoko le nto enze iindlela ezahlukeneyo zokuyenzela. Ezi zicwangciso azinzima konke konke. Ngokuchasene noko, ukulula kwayo kunye nokuthuthuzela kuvumela qhubela phambili amava kumsebenzisi xa ufumana kwakhona iphasiwedi ye-Instagram.
Abasebenzisi beqonga lewebhu le-Instagram, kuyacetyiswa ukuba ukhethe kwikhompyuter "khumbula iphasiwedi". Kwaye ke kuthintele ukuphulukana nokufikelela kwi intanethi Nangona kunjalo, ukuba sele ufuna ukukhumbula ipassword yakho, nayo inokwenziwa ukusuka kwikhompyuter.
Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram, ngokwesiko
Ukwenza oku, kuya kuba yimfuneko ukuvula usetyenziso esuka kwifowuni. Okanye ukusilela oko, iwebhusayithi ye-Instagram. Ukuba umsebenzisi ayisiye isicelo, sisixhobo sabo esiselfowuni ngesizathu esithile, kuya kufuneka benze inkqubo yokukhuphela kunye neyokufaka kwangaphambili. Kuya kufuneka ukwazi ukutshekisha imeyile ngexesha lenkqubo
Inyathelo lokuqala lokufumana kwakhona iphasiwedi ye-Instagram vula isicelo, ngale ndlela kuya kuboniswa ifom esisiseko. Kule fomu, kufuneka ucele isazisi sakho somsebenzisi kunye negama lokugqitha kulo.
Ngezantsi nje kwefom, ithebhu iya kuvela ekubhaliweyo kuyo "Khohlwa igama lam eliyimfihlo". Ukuba kunjalo, umsebenzisi kufuneka ucofe kwithebhu yokubuyisela iphasiwedi ye-Instagram.
Emva kokucinezelwa "Khohlwa igama lam eliyimfihlo", umsebenzisi kufuneka azazise. Oku kuyakwenziwa ngokubeka i-imeyile yakho ukufikelela kwiqonga kwibhokisi ehambelana nayo. Emva kokufaka i-imeyile, umsebenzisi kufuneka aqhubeke at "Thumela ikhonkco lokungena". Ngale nto, kufuneka ufumane i-imeyile, equka ikhonkco lokutshintsha iphasiwedi yakho. Kwaye gcina utshintsho, ngale ndlela xa ufikelela kuyo kwakhona kuya kuba nephasiwedi yakutshanje.
Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram, ngesicatshulwa.
Okwangoku iindlela zokuqinisekisa zikho ezahlukeneyo kakhulu Kwaye uninzi lufikeleleka kubasebenzisi. Okwangoku, ukusetyenziswa kweefowuni eziphathwayo kuvumele ukuqatshelwa kwabasebenzisi ukuba kwenziwe lula. Kongezwe koku, yi ukulula kunye nokulula inkqubo yokufumana kwakhona i-password ye-Instagram ngokusebenzisa miyalezo.
Vula kwaye ulibale
Kwakhona, inkqubo ye buyisela ipasigama I-Instagram ngokuvulwa kwesicelo. Ngale ndlela, ifom ehambelana nedatha yomsebenzisi ingaboniswa. Ngezantsi nje kwendawo yokuzalisa kufuneka ufumane ithebhu "Khohlwa igama lam eliyimfihlo". Umsebenzisi kufuneka acofe kwi-thebhu, kwaye iya kuthunyelwa ngoko nangoko kwiphepha elitsha.
Emva kokuchofoza "Khohlwa igama lam eliyimfihlo" kwaye ibuyiselwe kwiphepha lemibuzo elitsha. Umsebenzisi kufuneka agcwalise ibhokisi eceliweyo ngegama labo lomsebenzisi. Ukucofa iqhosha elilandelayo kwaye uluhlu lwezinto ezikhethiweyo luya kubonakala phambi kwayo. Ke, umntu lowo kuya kufuneka acofe Thumela iSMS" Ke, uya kuthi emva koko ufumane umyalezo wombhalo oyalela imiyalelo kufuneka alandele ukwazi ukufikelela kwiprofayile yakho kwakhona.
3 Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram
4 Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram, ngokwesiko
4.2 Khohlwa ngePassword
5 Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi ye-Instagram, ngesicatshulwa.
5.1 Vula kwaye ulibale
5.2 Thumela umyalezo
NgoJanuwari 15, 2019
Ukwenza imali kwi-Instagram yakho, Funda apha!